UMotlanthe uzombangisa uZuma | IOL Isolezwe
UMotlanthe uzombangisa uZuma
Isolezwe / 14 December 2012, 3:55pm /
MNUZ Jacob Zuma
IPHINI likaMengameli we-African National Congress (ANC), uMnuz Kgalema Motlanthe, seliphumele obala lakucacisa ukuthi lizosingenela isikhundla sokuba ngumengameli walo mbutho engqungqutheleni eqala ngeSonto eMangaung, eBloemfontein.
UMotlanthe, uphumele obala izolo ngalokhu ngomlomo kamkhulumeli wakhe uMnuz Thabo Masebe. Phezu kokuba iKhomishini yokhetho yangaphakathi kuKhongolose ikushilo esithangamini nabezindaba eLuthuli House ukuthi ayikwazi ukusho ukuthi ngobani asebevumile ukuphakanyiselwa ezikhundleni ezithize kodwa uMasebe ukuqinisekisile ukuthi uMotlanthe, ukwemukele ukungenela esobumengameli. Ubalule nokuthi kukhona nesinye isikhundla akwemukele futhi ukuqokelwa kusona. Izinkomba zithi ngesokuba yiPhini likaMengameli uma egoba uphondo kwasigaqele.
Lokhu kuqeda ukuqagela obekulokhu kukhona ngoMotlanthe ozobe ebhekene ngqo noMengameli Jacob Zuma. Kulindeleke ukuba uMotlanthe azivumele yena ngomlomo wakhe ngeSonto uma esebuzwa engqungqutheleni ukuthi uyamelana yini noZuma. Emibikweni yabezindaba eyehlukene uMasebe, ubelokhu emile ekutheni uMotlanthe, ngeke avume kwabezindaba ukuthi yisiphi isikhundla azosingenela eMangaung kodwa uyovuma uma esebuzwa wuhlaka olufanele. Kwayena uMotlanthe, emasontweni amabili edlule uke wacashunwa ethi: “Lokho ngokusho uma sengibuzwa yiKhomishini yokhetho engqungqutheleni njengokwenqubo ye-ANC. Angikwazi ukuvuma izikhundla ngoba ngibuzwa ngabezindaba.”
Njengamanje izinkomba zezibalo ziyamphikisa uMotlanthe njengoba eqokwe yizifundazwe ezintathu okuyiGauteng, Limpopo neWestern Cape, ekubeni uZuma eqokwe ngeziyisithupha nazo zonke izinhlaka zikaKhongolose ngaphandle kolwentsha oluqoke uMotlanthe. Ukuvuma kukaMotlanthe ukuphonsela uZuma inselelo nokubuka izinombolo zezithunywa ezizovotela abaholi, kubeka ikusasa lakhe nabanye abaholi abasohlwini lwakhe, engcupheni yokushabalala kwezombusazwe. Abanye babo bangase bazithole besemseni wamalungu njengoba bevela kuzo zombili izinhla.
Isifundazwe esinezithunywa eziningi kakhulu okuyiKwaZulu-Natal, sithi uMotlanthe, wenza okuyilungelo lakhe njengelungu likaKhongolose.
Okhulumela lesi sifundazwe, uMnuz Senzo Mkhize, uthe basamile kwabakuthunywe ngamagatsha kaKhongolose athi akafike abeke uZuma esekelwe ngumaliyavuza kasomabhizinisi onguMnuz Cyril Ramaphosa.
“Njengoba sihlale sisho ukuthi wonke amalungu kaKhongolose anelungelo lokuqokelwa kunoma yisiphi isikhundla, namanje sisamile kulokho. UMotlanthe usebenzisa ilungelo lakhe, nathi sizokwenza esikuthunywe ngamalungu kaKhongolose KwaZulu-Natal. Okunye esinakho emqondweni wukuthi siya eMangaung ngenhloso yokuyobumba umbutho ngakho-ke akuchazi ukuthi uma kukhona abangaboni ngendlela eyodwa nathi sizobe sesibahlanza ngaphandle okwenyongo yenyathi. Uma kukhona abaholi esibonayo ukuthi banohlonze, bahambisana nakho konke okudingwa wumholi okumele abe sesigungwini esiphakeme, ngeke singabaze ukumfaka, noma ngabe ubengaboni njengathi ngesikhathi kusaqokwa njengoba kwenzeka nasengqungqutheleni yasePolokwane,” kusho uMkhize.
Omunye umholi osezwakalise ukuthi uzosemukela isikhundla aqokelwa kusona nguMgcinimafa-jikelele, uMnuz Matthew Phosa, okusanda kusuka umsindo ngaye ebanga isikhundla sePhini likaMengameli noMnuz Tokyo Sexwale.